कांग्रेससँगको छलफलपछि महन्थ ठाकुरले भने– हाम्रो लागि सब ओली सरकार नै हो Canada Nepal
राप्रपाको मतदान जारी, अझै १५ सय मत खस्न बाँकी
पार्टी एकतापछि विवेकशील साझा पार्टीद्वारा घोषणापत्र जारी
मुगु एक सातादेखि अन्धकार, माेबाइल चार्ज गर्न सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने
कांग्रेससँगको छलफलपछि महन्थ ठाकुरले भने– हाम्रो लागि सब ओली सरकार नै हो
फाल्गुण २८ २०७७
काठमाडौं । ओली सरकारको विकल्प खोज्नु पर्ने बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग शुक्रबार साँझ छलफल भएको छ ।
ओली सरकारको विकल्पमा जानुपर्ने बताउँदै आएको कांग्रेसका र जसपाका शीर्षनेताहरुबीच शुक्रबार साँझ देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा छलफल भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने अदालतको आदेश आएपछि सत्ता सहकार्यका लागि दलहरु परामर्शमा जुटिरहेका छन् । निर्णायक मानिएको जसपासँग सत्तारुढ एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि छलफल गरिसकेका छन् ।
ओलीको एक्सन : नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसे, माओवादीबाट आएका को–को बने सदस्य ?
यही क्रममा शुक्रबार जसपाका शीर्षनेताहरुसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुले छलफल गरेका हुन् । जसपाका नेताहरुसँग छलफल गर्नु अघि शुक्रबार कांग्रेसका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । सो क्रममा ओली सरकारको विकल्प खोजेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले निकास निकाल्नु पर्ने निष्कर्ष निकाले प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
सो निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस र जसपाबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जानकारी दिए । उनकाअनुसार जसपाले रेशम चौधरीसहित आफ्ना बन्दी नेताहरुको रिहा गर्नुपर्ने, नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा लिनुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पुरानै सर्तहरु कांग्रेससँग राखिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री सहमत, प्रचण्ड र अफ्ताव आलमको के हुन्छ ?
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भने नभएको बताएका अध्यक्ष ठाकुरले मिलेर जाउँ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव आएको बताए ।
कांग्रेससँगको छलफलबारे उनले भने, ‘सबै मिलेर जाने कुरा भएको छ, ठिक छ मिले जाउँ भन्यौँ । अब माओवादी केन्द्रसँग पनि कुरा गर्छाैँ । त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’ सबै दलहरुसँग छलफल गरिसकेकाले कोसँग सहमति नजिक हुनुहुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा अध्यक्ष ठाकुरले हाँस्दै भने, ‘हाम्रो लागि सब ओली सरकार नै हो ।’
जसपाले सरकार चलाउने र तपाइँ प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा छ नि भन्ने अर्काे जिज्ञासामा उनले हाँस्दै भने, ‘तँपाईको मुखबाट सुनेँ । यो त खुसीको कुरा हो । यस्तो राम्रो खबरका लागि तपाइँलाई धन्यवाद छ । यो त मेरो लागि खुसीको सरप्राइज नै भयो ।’
बैठकमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजेन्द्र महत्तो सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा.शशाङ्क कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत सहभागी थिए ।
फाल्गुण २८, २०७७ शुक्रवार १८:३९:४८ बजे : प्रकाशित
# ओली सरकार
# कांग्रेस र जसपा
काठमाडौं - काठमाडौंमा जारी राप्रपाको महाधिवेशनमा दुई हजार मत खसेको छ । निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतका अनुसार अझै २३ सय मत खस्न बाँकी छ । पार्टी एकतापछि राप्रपाको यो पहिलो अधिवेशन हो । यही महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देलको प्यानल चुनावी मैदानमा छ ।
मंसिर १८, २०७८ शनिवार १६:५८:५३ बजे : प्रकाशित
पोखरा - नेपाली कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत मतदान सकिएको छ । शनिबार बिहान पौने १० बजेदेखि सुरु भएको मतदान भर्खरै सकिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा एक हजार एक सय ४६ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यहाँ एक हजार एक सय ६० मतदाता थिए । गण्डकीको नेतृत्वका लागि संस्थापन र संस्थापन इतरको प्रतिस्पर्धा छ ।
संस्थापन पक्षबाट अर्जुन जोशीले नेतृत्व गरेका छन् भने इतरबाट शुक्रराज शर्मा सभापतिको उम्मेद्वार छन् । दुवै हेभिवेट नेता भएकोले नतिजा कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिने प्रतिनिधिहरूकाे भनाइ छ । त्यसो त, जिल्ला सभापति हेर्दा संसथापन पक्ष बलियो छ भने प्रदेश महाधिवेसन प्रतिनिधिमा पैडेल समूहको बहुमत रहेको आंकलन गरिएको छ ।
धेरैले प्यानलमा मतदान नगर्ने अवस्था छ । युवापुस्तामा जोशी बलियो छन् भने पाका नेताहरुले शर्मालाई रोज्न सक्छन् । त्यसमाथि शर्मा सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्ला कास्कीका हुन् । कास्कीमा तीन निर्वाचन क्षेत्र छ । जोशी पर्वतका हुन्, जहाँ एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । भुगोलको प्रभाव पर्याे भने शर्माको पल्ला भारी हुन सक्ने मतदाताकाे अनुमान छ ।
मंसिर १८, २०७८ शनिवार १७:०७:४४ बजे : प्रकाशित
काठमाडाैं - विवेकशील साझा पार्टी, सिटिजन्स डिसकशन फोरम, राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीले एकता गरेसँगै घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
शनिवार जारी घाेषाणा पत्रअनुसार एकीकृत पार्टीको नाम ‘विवेकशील साझा पार्टी’ हुनेछ भने एकीकृत पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्ह ‘तराजु’ हुनेछ। यस्तै, एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र हुनेछन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बखुण्डोल, ललितपुरमा रहने जारी विज्ञप्तीमा उल्ले छ ।
मंसिर १८, २०७८ शनिवार १७:१०:३८ बजे : प्रकाशित
# विवेकशील साझा पार्टी
काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको मतगणना जारी रहेको छ । शनिबार अबेर गरी सुरु भएको मतदान प्रक्रिया जारी रहेकाले अझै लम्बिने भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म २९ सय मत खसेको छ । अझै १५ सय मत खस्न बाँकी रहेको छ ।राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कूल मतदाता ४ हजार ४६९ रहेका छन् ।
राप्रपाको निर्वाचन प्रक्रियामा २६४ उम्मेदवार रहेका छन् । नेतृत्वका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।
उम्मेदवारको लिस्ट लामो रहेको र कसलाई मत हाल्ने भन्ने लिस्ट नहुँदा मतदान अन्योलमा परेको बताइएको छ । मतदानका लागि बढीमा १५ मिनेट लाग्नेमा प्रतिनिधिले आधा घण्टासम्म लगाउने गरेका छन् । निर्वाचन अधिकृत बस्नेतले आजै मतदान सकेर राति नै मतगणना गरिने बताए ।
मंसिर १८, २०७८ शनिवार २०:४७:२२ बजे : प्रकाशित